Heshiiskii Xabad-joojinta Azerbaijan iyo Armenia Oo Mar kale Bur-buray – Heemaal News Network
Heshiiskii Xabad-joojinta Azerbaijan iyo Armenia Oo Mar kale Bur-buray
Armenia iyo Azerbaijan ayaa maanta oo Axad ah midba kan kale ku eedeeyay in uu ku xadgudbay xabad-joojinta cusub ee bani’aadamnimo ee gobolka Nagorno-Karabakh, saacado uun ka dib markii ay xabbad joojintaasi dhaqan gashay.
Farriin ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka saacadihii hore ee Axadda ayay Wasaaradda Difaaca ee Armenia ku eedeysay Azerbaijan in ay jebisay xabad-joojinta cusub ee gobolka Nagorno-Karabakh iyadoo adeegsaneysa madaafiic iyo gantaalo.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa iyana bayaan ay goor dambe soo saartay ku sheegtay in “cadowgu uu madaafiic iyo hoobiyeyaal ku garaacay agagaarka magaalada Jabrail, iyo sidoo kale tuulooyinka gobolkan,” waxayna intaas ku dartay in ciidanka Azerbaijan “ay qaadeen tallaabooyin buuxa oo aargudasho ah”.
Azerbaijan iyo Armenia ayaa ku dhawaaqay in ay oggolaadeen xabad joojin cusub oo bilaabanaysa Axadda, waana isku daygii labaad ee todobaad gudihiis ah si loo xakameeyo ku dhowaad saddex usbuuc oo dagaal ah uu ka socday Nagorno-Karabakh.
“Jamhuuriyadda Armenia iyo Jamhuuriyadda Azerbaijan waxay ku heshiiyeen xabad joojin bani’aadamnimo laga bilaabo 18-ka October, saqda dhexe ee waqtiga maxalliga ah,” Wasaaradda Arrimah Dibadda ee Armenia ayaa sidaas sheegtay goor dambe oo Sabtidii ah.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Azerbaijan ayaa soo saartay bayaan ay ku xaqiijineyso xabbad joojinta la gaaray.
Ku dhawaaqista xabbad joojinta ayaa yimid ka dib markii Wasiirka Arimaha Dibada Ruushka Sergey Lavrov uu qadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa Armenia iyo Azerbijan. Lavrov iyo Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa labaduba carrabka ku adkeeyay in xabad joojintu ay tahay in labada dhinacba ay si adag u ilaaliyaan.
Qoyska Gabadhii Lagu Kufsaday Xarunta Agoonta Oo Saluugay Xakunkii Eedaysanayaasha Lagu Riday.
Maleeshiyo Beeleed Iyo Hubkoodii Oo Maanta Lagu Wareejiyay Galmudug.(Sawiro)